Afar Solutions aad ka ogaato in ay dib Your Photos in Cloud.
1.Backing ilaa Photos si aad u iCloud
2.How si ay awood il sawir iCloud aad iPhone
3.How si ay awood iCloud Photo Library on iPhone
siyaabo fudud 4.Other in gurmad Photos in hadhaysaa
Waxaa runtii muhiim ah in gurmad sawiro aad ay dhacdo in qalab aad waxyeelloobo, maqan, ama laga badiyay ama uu xaday. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay lumiyaan xusuus aad ka qabsadeen qalab macruufka. Xogta ku faafaa meel kasta oo aad qalab macruufka ah. Arrintan ayaa waxaa u fudud iyadoo la kaashanayo iCloud, ama aad awooddo sawirro aad sidoo kale si fudud gurmad ka iPhone, iPad, iPod ama taabashada si aad laptop ama computer iyadoo la kaashanayo Lugood. Si kastaba ha ahaatee iyadoo iCloud aad leedahay xad aad, kaydinta xorta ah waxay ku saabsan tahay 5 GB oo la siiyo t user kasta oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha uu leeyahay ID Apple ah macruufka. Kaydinta Tani waxay ku yimaado anfacaya marka aad leedahay qalabka macruufka badan oo aad isticmaali iCloud joogta ah in ay dib u dukumintiyada iyo emails.
Qaybta 1aad Backing ilaa Photos si aad u iCloud
By isticmaalaya iCloud Photo Maktabadda, waxaad ka heli awood u leh inay qabsadaan oo ay ku kaydiso oo dhan ee sawirada in si iCloud, isagoo aan wax xad, ka duwan Stream Photo kaas oo laga soo qaatay tan iyo sanadihii hore. Inta lagu kaydiyo iCloud waxaa laga heli karaa, iCloud Photo Library badbaadin karo dhammaan daqiiqado aad u qaali ah oo cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad abid ka yaabay, waxa natiijada suuragelinayo Stream Photo yahay?
Inta aynaan aan aragno Farqiga u dhexeeya Photo Stream iyo iCloud Photo Library. Xilligan hadda iCloud Photo Library ayaa weli la soo shaqeeyay korkiisa, wuxuuna qaab beta; Si kastaba ha ahaatee marka la isticmaalayo adeegan waa talo in gurmad aad sawiro, aad ku leedahay qorshe dukaanka.
Hoos waxaa barbar ka mid Photo Stream iyo iCloud Photo Library:
Waxay leedahay awood u leh inuu badbaadiyo inta badan 1000 dhawaan sawiro ama images of soddon maalmood ee la soo dhaafay
Wax macno ah ma isticmaali meel iCloud ah
Waxaa la socon kara oo dhan oo ka mid ah qalabka macruufka oo ka mid ah iPod, iPhone, PC iyo Mac.
Waxa badbaadiyay version internetka ee sawirada, taas oo yarayn karo tayada
Ma u hagaagsan karo iyo geliyaan videos
Waxaa u hagaagsan karaa albums iyo sawiro ka PC ama Mac dhex Lugood mar kasta Stream Photo waxaa u suurta
Saves sawirada, kuwaas oo aan lahayn xad kasta oo inta meel iCloud waxaa laga heli karaa dukaanka aad video shakhsiga ah iyo.
Ka dhig isticmaalka iCloud Kaydinta
Easy in ay helaan on iPad, iPhone, iyo sidoo kale iyada oo loo marayo iCloud.com
Wuxuu badbaadin karaa sawir ee High Qeexid (HD) oo tayo leh oo ku saabsan qalabka iyo server aad sidoo kale. Oo weliba waxa ay leedahay qaabab badan sida TIFF, GIF, cayriin, JPG iyo kuwa kale
Waxaa u hagaagsan karaa videos iyo geliyaan sawirada
Si kastaba ha ahaatee aadan haysan awood u leeyahay inuu u hagaagsan sawirada albums oo ka PC ama Mac la Lugood mar kasta oo aad isticmaasho iCloud Photo Library, iyo sidoo kale sidoo kale wax kasta oo albums oo ay jiraan is saari doonaa marka adeegga uu karti.
Part 2 Sidee si ay awood il sawir iCloud aad iPhone
In Photos app ee iPad iyo iPhone, Photo Stream waa la heli karaa. Tani waxaa loo arkaa qayb ka mid ah iCloud oo syncs sawirada mar walba mar kasta oo uu ku xiran internetka via Wi-Fi. Si aad u awood Photo Stream raacaa talaabooyinka hoos ku xusan:
1. aad iPad ama iPhone Settings tuubada
2. Daahfurka iCloud waxaa ka
3. Hadda, tuubada Photos
4. Hoos qaybta Photos, sii jeeg in My Photo Stream waxaa u suurta
5. Photo qaybsiga sidoo kale in karti loo kartaa shaashadda hoose ka halkaas oo aad ka dhigi kartaa il sawirka si aad ula wadaagto dadka kale.
Part 3 Sidee si ay awood iCloud Photo Library on iPhone
Si aad u isticmaasho iCloud Photo Library aad iPod ama iPhone, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Settings tuubada on iPhone
Scroll iyo abuurtaan iCloud
Hoos u dhaqaaq oo ka raadi "Sawirro" oo ka jaftaa
4. Hadda awood iCloud Photo Library ka jiraan
Qeybta 4 Siyaabo kale oo fudud si Photos gurmad on iPhone
ICloud ka sokow, waxaa jira siyaabo kale oo sidoo kale in ay dib u kor u qaado sawiro, iyaga ka mid ah waxaa ka mid ah DropBox iyo Flickr.
Sanduuqa oo hoos siinayaa 2GB ah meel lagu kaydiyo oo xor u yahay in dadka isticmaala ay. Si kastaba ha ahaatee, meesha bannaan ee kor u qaadi kara taas oo ku xiran aad u baahan tahay. Wadarta waxay bixisaa 500 GB oo ah meel bannaan ee lacagta caymiska.
Si kastaba ha ahaatee in ay sawiro gurmad via DropBox raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Ku rakib and Download Codsiga WordPress oo laga heli karo lacag la'aan ah oo ah qiimaha ugu App Store ah
Samee in aad xisaabta, taas oo lacag la'aan ah
Laga soo bilaabo aad screen guriga lagu daahfuri App DropBox ah
Ugu shaashadda meesha uu ku leeyahay "Camera Upload", soo qaado "Kaliya Wi-Fi" iyo awood doorasho in. Si aad u siin DropBox helitaanka ee camera aad u oggolaadaan, tuubada "ogolow"
Idinku waxaad tihiin oo dhan diyaar u ah inay dib ilaa sawiradaada.
Tani waxay sidoo kale waa adeeg daruur kaas oo ay bixiyaan Flickr meesha photos yihiin isla xoojiyaa via iPhone. Waxay bixisaa 1TB meel bannaan oo gabi ahaanba waa bilaash ah. Si gurmad Photos Raac tallaabooyinka hoose:
Open App Store oo Download App Flickr ah
Hadda abuuro xisaabtaada, ama haddii aad tahay user ah ee hadda jira si fudud login
Qeybta hoose ee shaashadda ka jaftaa camera qaabeeya icon
Dooro sawirada in aad rabto in gurmad
Waxaas oo dhan waxaad diyaar u tahay geliyaan oo gurmad
> Resource > iCloud > Afar xal waa in aad ogtahay in ay dib u kor sawiro aad u hadhaysaa.